Baro Sida Loo EcoThrift! - Xarunta EcoTechnology
Iftiinka iftiinka giraanta ayaa ka tarjumaya indhaheeda. YouTuber -ku wuxuu u tilmaamayaa dhar badan oo sariirteeda saaran. Dhibtu waxay tahay in dharku ay yihiin kuwo cusub, oo si aad ah loo sameeyay, isla markaana ay dhowaan u dhaqaaqi doonaan hal meel oo ku filan: qashin qubka. Dhibaatadan waxaa ku jira ereyga qashinka dharka. Qashinka dharka waxaa Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka ku qeexday inay tahay qashin ka dhashay wareejinta alaabada aan raagin (EPA). Badeecadaha aan raagin waa shay loo malaynayo inay waxtar leeyihiin ilaa saddex sano (EPA). Qashinka dharka ayaa quseeya iyada oo si weyn uga qayb qaadata mugga qashin -qubka.
Dhanka kale, soosaarka dharka iyo hannaanka kala -guurku wuxuu keenaa arrimo isku -dhafan sida wasakhowga hawada iyo biyaha (Utebay et al.) Si fudud haddii loo dhigo, moodada dhaqsaha leh waxay hordhac u tahay qashinka dharka. Sidan oo kale, waxaa jira welwel anshax oo ku xeeran qashinka dharka. Nidaamyada moodada dhaqsaha leh waxay sii wadaan dhaqamada foosha -xun ee adduunka soo koraya iyo xitaa rabshadaha ka dhanka ah haweenka (Green America).
Aniga iyo adiga labadeenaba waxaan leenahay doorkan waxan oo dhan. Tixgeli qiyaasta qashinka dharka ee shaqsi ku nool Mareykanka soo saaro sannadkii - 81.6 rodol (BBC). Marka la eego, waxaan ka ciyaari karnaa kaalin firfircoon hoos u dhigidda qashinka dharka iyo yareynta taageerada warshadaha moodada dhaqsaha leh. Markaan qaadno tallaabo aan ku yareyneyno adeegsiga badeecadaha aan sii socon karin, waxaan yareyn karnaa qaddarka la filayo ee qashinka la xiriira dharka, oo aan ku xusin dhibaatada la socota.
Rajo ayaa jirta suurtogalnimadan awgeed. Waxay u noqon kartaa qof kasta oo YouTuber ah oo sameeya dhaq -dhaqaaqa dhaqsaha badan, waxaa jira mid muujinaya wax ay ka soo qaateen suuqa boodada. Waxaa jira dan guud oo weligeed sii kordheysa marka ay timaaddo in si tartiib ah loo adeegsado dharka. Suuqa lagu iibiyo dharka gacanta ayaa la saadaalinayaa inuu si weyn u kori doono sannadaha soo socda, iyadoo la saadaalinayo inay noqon doonto qiyaastii $ 84 bilyan marka la gaaro 2030 -ka (Harper's Bazaar). Waxaa loo malaynayaa in moodada dhaqsaha badan, oo ka dhigan soo -saaridda iyo iibinta dharka aan sii jiri karin, ay xisaabi doonto in ka yar kala bar lacagtaas isla sannadkaas (Harper's Bazaar). Tirakoobyada sidan oo kale ah ayaa ina tusaya in ay jirto beddel dhab ah oo lagu iibsan karo alaabta cusub iyo in la shidayo moodada degdegga ah.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabban tahay xaaladda dukaamada wax-soo-saarka tan iyo COVID-19. Dukaamaysiga meesha ugu sarreysa ee masiibada waxay ahayd hawl aad u qallafsan, oo loogu talagalay waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka. Dukaamada wax -soo -saarka ayaa si dabiici ah u arkay ilaalin aad u yar intii lagu jiray wakhtigaas, laakiin sidoo kale waxay sameeyeen dukaamada caadiga ah. Waxaad u malaynaysaa in is -beddelkani uu sii socdo maadaama masiibada ay soo jiitamaysay, iyadoo dadku ka baqayaan in cudurku ku raago dharka.
Si kastaba ha ahaatee, cabsida ayaa u muuqata inay yaraatay maaddaama dukaamada wax -soo -saarka ay si fiican u shaqeynayaan. Moodada dhaqsaha ah sidoo kale ma dhicin. Saamaynta dhaqaale ee COVID-19 lama soo koobi karo. Moodada dhaqsaha badan ayaa dhowaan ku dhacday burbur dhammaystiran marka loo eego nidaamyadeeda sahayda (Brydges et al). Shakhsiyadu waxay waayeen ilihii dakhligooda markii shaqadu noqotay mid aad halis u ah.
Laga soo bilaabo beanies ilaa jaakadaha, waxaad ka heli kartaa maqaallo badan oo dhar ah oo lagu iibiyo xaafaddaada (ama dalwaddii) dukaanka wax iibsiga.
Marka la eego dhaqdhaqaaqyadan, ma aha wax la yaab leh markaa in dukaamada wax -soo -saarku ay la kulmaan koror ku yimaada ilaalin iyo sidoo kale tabarucaad, maaddaama dadka qaar ay raadiyaan inay lacag keydsadaan halka kuwa kalena ay raadinayaan inay yareeyaan culeyska gurigooda (The Columbian). Isla mar ahaantaana, warbaahinta bulshada dabcan waxay sii ahaanaysaa behemoth, barnaamijyada sida TikTok waxay leeyihiin isticmaaleyaal soo bandhiga waxyaabaha ay heleen. Tani waxay ku dhiirri -gelinaysaa dadka kale ee jiilka soo koraya inay si joogto ah u dukaameystaan, sida laga soo xigtay macmiil dukaan wax -iibsi ah oo uu wareystay wargeys maxalli ah (Williams, The Columbian).
Waxaan si wadajir ah u go'aansannay in dib -u -dhacyada suurtagalka ah ee wax -soo -saarka ay yihiin kuwo aan laga gudbi karin. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo wax -ka -beddel ah oo weli noo bannaan inkastoo masiibada. Fadlan sii akhri si aad wax badan uga ogaato wax -u -dhiska!
Afeef: Badbaadadaada iyo nadaafaddaada, hubso inaad si fiican u dhaqdo dhar kasta oo aad iibsato ka hor intaadan xidhin. Tani waxay khusaysaa haddii la xoqay iyo haddii kale!
Akhri si aad wax uga ogaato xulashooyinka kala duwan ee aad haysato marka ay timaaddo wax -soo -saarka!
Depop waa app caan ah kaas oo la bilaabay 2011. Isticmaalayaasha ayaa ku iibin kara abka sida dharka iyo dahabka gacanta lagu sameeyo. Waxaan ka iibsaday Depop dhar badan oo gurracan oo tayo sare leh.
Shabakadaha Internetka (oo ay ku jiraan goobaha Raaxada)
ThredUp, PoshMark, ReealReal, Arbacada ah, Etsy, Suuqa Suuqa. Kuwani waa qaar ka mid ah websaydhada kuu oggolaanaya inaad gasho canabka iyo waxyaabaha la isticmaalay, oo ay ku jiraan kuwa sumadda leh.
Ku -beddelashada is -weydaarsigu waa hab cajiib ah oo lagula kulmo dad cusub adiga oo "wax iibsanaaya" miyir -qabka ah oo aan lahayn kharash dhab ah. Dabcan, maskaxda ku hay ammaanka haddii aad doorato inaad ka qaybgasho kulannada is -dhaafsiga. Tixgeli inaad mid ku martigeliso goobtaada shaqada haddii aad shaqsi ahaan u shaqayso.
Dukaanka ku jira
Dabcan, waxaa jira dukaamo leben iyo hoobiyeyaal ah oo aad mar walba aadi karto. Hubi inaad raacdo tilmaamaha badbaadada faafa marka aad baxeyso.
Qolka hoose iyo armaajada “shopping”
Fursadaha waxaad ku tuurtay in ka badan hal maqaal oo dhar ah qoto dheer, mugdi mugdi ah ee armaajadaada. Ama haddii aad haysato meel hoose, wax baad meesha dhigtay, oo aan mar dambe la xidhin ama dib loo isticmaalin. Guriga hoose iyo armaajada “dukaamaysiga” ayaa kaa caawin kara inaad dib u ogaato qaybo, oo ay ku jiraan dharkii iyo dharkii aadan isticmaalin sababtoo ah waxaad si dhab ah u illowday iyaga. Dhawaan waxaan rabay inaan ku iibsado sariir cusub oo bac ku jirta, laakiin marka hore waxaan eegay qeybta hoose ee guriga waxaanan helay qurux badan, ku dhowaad raaxo cusub oo aan hore ugu isticmaali jiray qolkayga hurdada.
Dukaameysiga daaqaddu had iyo jeer waa hab madadaalo leh oo waqti lagu qaato! Haddii aad ku fekereyso inaad iibsato wax aan degdeg ahayn, sug muddo toddobaad ah oo arag haddii aad ku noolaan karto adigoon iibsan shayga isla markiiba.
Isku day inaad ku biiriso wax -soo -saarka noloshaada oo arag faa'iidooyinka ay keenayso. Dhab ahaantii waa hab sahlan oo si jaban loogu dukaameysto waxyaabaha qaarkood ee aad u baahan tahay. Oo sidii aan daboolnay, waxaa jira aagag fara badan oo la mari karo oo lagu dabagalo shaygaaga cusub ee aad jeceshahay.
By Fatin Chowdhury|2021-09-15T09:27:20-04:00September 9th, 2021|Recycling, Sustainability, Weecinta Qashinka|